Saldhigyo boolis oo dheeraad ah oo laga hirgelinayo ismaamulka Laikipia | Star FM
Home Wararka Kenya Saldhigyo boolis oo dheeraad ah oo laga hirgelinayo ismaamulka Laikipia
Saldhigyo boolis oo dheeraad ah oo laga hirgelinayo ismaamulka Laikipia
Dowladda ayaa saldhigyo booliis oo dheeraad ah ka hirgelin doonta degmada Ol-Moran ee ismaamulka Laikipia oo ah goob ay burcad ka gaysanaysay weerarro ay dad ku dhinteen sidoo kalena hanti lagu burburiyay.
Xarumahan cusub ayaa kaalin ka qaadan doono xakamaynta rabshadaha aaggaaasi ka jira iyo dhaca xoolaha.
Wasiirka wasaaradda arrimaha gudaha ee dalka Dr Fred Matiangi ayaa sheegay in la dhisi doono xarun cusub oo boolis ah islamarkaana saraakiil ku filan oo roondooyin aaggaasi ka sameeya la gayn doono.
Waxaa uu intaa ku daray in saldhig ciidamada lagu tababarro laga hirgelin doono dowlad deegaanka Laikipia si kor loogu qaado joogitaanka saraakiisha si ay uga falceliyaan burcadda waxyeellada ka gaysato ismaamulkaasi.
Mr. Fred Matiangi ayaa carrabka ku dhuftay in si ka duwan sidii hore, ay dowladda xero ka dhisan doonto aaggaasi si loo xaqiijiyo nabadda iyo badqabka dadka deegaanka.
Wasiirka wasaaradda arrimaha gudaha ayaa ku boorriyay dadka deegaanka Laikipia in ay u hoggaansamaan bandowga habeenkii ee lagu soo rogay ismaamulkaasi kaas oo bilaabanaya 6-da maqribnimo ila 6-da aroornimo si loogu oggolaado laamaha amniga in ay gutaan waajibaadkooda ku aaddan soo celinta nabadda.
Waxaa uuna digniin u diray kuwa rabshadaha wada.
Waxaa uu intaa ku daray in dowladda ay adeegsan doonto dariiq kasta oo suurtagal ah si loo xaqiijiyo xasilloonida.
Dr Fred Matiangi ayaa sheegay in dowladda ay hadda ku daba jirto shakhsiyaad la rumeysan yahay inay ka dambeeyaan rabshadaha ismaamulka Laikipia.
Waxaa uu dadka dowlad deegaanka Laikipia u xaqiijay in hadda wixii ka dambeeya uusan qofna ka barakici doonin deegaankiisa.
Previous articleWaaxda DCI-da oo bilowday baaritaano lagu baadi goobayo aqoonyahan Sh Cabdiwahaab